မြရွက်ဝေ: July 2010
တိုတို နဲ့ ကိုယ်
မနေ့က 'တိုတို'ကြောင့် အတော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ (ရွံတတ်ရင် မဖတ်နဲ့နော်) 'တိုတို'ဆိုတာ Washlet အမည်ပါ။ ဂျပန်မှာ Washlet ဆို 'တိုတို'လို့ ပြောလို့ရတယ်။ 'တိုတို' Washlet က အနွေးပေး system ပါတဲ့ electric toilet seat ပါ။ အဲဒီ washlet အမျိုးအစားကို စတီထွင်တုန်းကတော့ မသန်စွမ်းသူတွေ အတွက်ရည်ရွယ်တာပါတဲ့။ ရေဆွဲချတဲ့ဘားကို အနောက်မှာမဟုတ်ဘဲ ခြေထောက်ချတဲ့ နောက်နားမှာ နင်းလို့ရအောင် ခလုပ်ထားထားပေးတာ။ အဲဒီကနေ လူကြိုက်များလာပြီး တီထွင်ရင်း ခုလို ခလုတ်တွေ Sensorတွေနဲ့ ဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတယ်။
ခလုပ်နှိပ်ရုံနဲ့ ok တာကတော့ ကောင်းပါရဲ့။ ဒါမျိုးတွေ မရင်းနှီးသူ တောသူမ ကျမအဖို့တော့ တခါခါ ချွေးပြန်ရတယ်။ အရင်အိမ်မှာက ရိုးရိုး toiletပါ။ အဲဒီတုန်းက အပြင်သွားတဲ့အခါ ဘူတာတွေ ဆိုင်တွေက toilet သုံးတဲ့အခါမျိုးကျ အဲလို washletဖြစ်နေရင် ပထမဆုံး ရေဘယ်လို ဆွဲချရပါ့ဆိုတာ အရင်ကြည့်ရတယ်။ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ရေဆွဲရတဲ့ဟာကလဲ မတူဘူးကိုး။ ပြီးတော့ ရှင်းပြထားတာတွေကလဲ ဂျပန်လိုချည်းမို့ ဂျပန်မှာ ဂျပန်စာ နားမလည်ရင် ဒုက္ခရောက်ရတာ တခြားဟာတွေထက် toiletလို့ ထင်တယ်။ ကိစ္စပြီးမှ အထဲမှာ ရေဆွဲချတာ ရှာမတွေ့ရင် ဒွတ်ခ! ကျောနောက်ဘက်က ရေလှောင်ပုံးလေးမှာ ရှိနေလား? အောက်ဘက်နားရောက်နေလား? Sensor ရှေ့မှာ လက်ဝါးလေး သွားဖြန့်ရမှာလား? ဒါမှမဟုတ် လူမတ်တပ်ရပ်လိုက်တာနဲ့ အော်တို ရေဆွဲချသွားတာမျိုးလား? စုံတကာစေ့နေတာဘဲ။
ပြီးတော့ အောက်ဘက်ကနေ ရေဖြန်းပေးအောင် နှိပ်ရတဲ့ လမုပင်အရိုး (remote control) ကလဲ ရှိသေးတယ်။ toilet seatနဲ့ ဆက်ရက်မဟုတ်ရင် နံရံမှာ ရှိတတ်တယ်။ အများသုံးဆိုရင် အဲဒီခလုပ်တွေ မနှိပ်ပါဘူး။ အစက မသိလို့ နှိပ်မိတယ်။ နောက်မှ ရေဖြန်းတံက သေချာမဆေးရင် မှိုအမဲတွေ အောက်ဘက်မှာ ရှိနေတတ်တယ်။ gym မှာ သွားဆော့ဘူးတုန်းက တနေ့ကို အကြိမ်ကြိမ် အိမ်သာသန့်ရှင်းရေး လုပ်နေတာ မြင်ပေမယ့် ရေဖြန်းတံကို ခေါင်းငုံ့ကြည့်လိုက်ရင် ဘေးတွေက မဲနေတာပါဘဲ။ ပုံမှန် အပေါ်ကကြည့်ရင် မမြင်ရဘူးလေ။ ဘယ်သူမှလဲ အဲလို သွားငုံ့မကြည့်လောက်ဘူးထင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်တောင် အိမ်မှာ အမှတ်မထင် ငုံ့ကြည့်ဖူးရင်း သတိထားမိတာ။ toilet brushနဲ့ တိုက်ရုံနဲ့ မရဘူးဆိုတာကို။ Spray bottle နဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဆေးရတယ်။ အများသုံးမှာကျ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့သူက အဲလောက် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အပြင်မှာဆို ရေဖြန်းတာ မသုံးပါဘူး။
ကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုယ်ကျ ကိစ္စမရှိဘူးလေ။ ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတာက ရေဖြန်းတာသုံးတာကို၊ ကိစ္စရှိလာတာက အဲဒီ လမု'ကို ကောင်းကောင်းနားမလည်တာ။ အိမ်ကြီးရှင်က setting ထားထားပေးတာကို ကိုယ့်ဘာသာ လျှောက်နှိပ်ကြည့်ပြီးရင် အချိုးက မပြေတော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ဘဲ ရေအပြင်း/အပျော့ကလွဲပြီး တခြားခလုပ်တွေ မနှိပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ setting ထားထားတဲ့အခါ ခလုပ်တခုခုနှိပ်လိုက်တိုင်း setting ထားထားတဲ့နေရာလေးတွေက မီးလင်းတယ်။ ကြာလာတော့ ခလုပ်နှိပ်လိုက်ရင် setting မီးလုံး အပြင် တခြားဟာတွေပါ အတန်းလိုက် လင်းလာတယ်။ ပျက်ချင်လာတာလားလို့ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမဖြစ်တော့ ဒီလိုဘဲ သုံးလာလိုက်တာ တနေ့တုန်းက ရေဖြန်းတာနှိပ်ပြီး stop ခလုပ်နှိပ်တာ ရေက ရပ်မသွားဘူး။
တကယ်ချွေးပြန်သွားတယ်။ တခြားခလုပ်တွေ လျှောက်နှိပ်ကြည့်တယ်။ ရေအနွေးပေးတာရယ် ထိုင်ခုံအနွေးပေးတာရယ် timerပေးတာ ချိန်မရဘူး။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ အမြန်မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့ နောက်ဘက်က sensor နဲ့ လူရိပ်လွတ်သွားလို့ သူ့ဘာသာ ရေရပ်သွားတယ်။ ခလုပ်နှိပ်မိရင် စက္ကန့်၃၀ ရေမရပ်တာမျိုးမဟုတ်လို့ တော်သေးတယ်၊ အဲလိုသာမဟုတ်ရင် တခန်းလုံး စိုရွှဲတော့မှာ။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိတော့ အတော်စိတ်ညစ်သွားတာ။
ဈေးသွားပြီး ပြန်လာတော့ နှိပ်ကြည့်တာ ရပြန်တယ်။ အဲဒါနဲ့ စိတ်ချလက်ချနေလိုက်တာ မနေ့က မနက်ကျ ပြန်ဖြစ်ပြန်ပါရော။ အဲဒီအချိန်ကျ အိမ်ကြီးရှင်လဲ အလုပ်သွားပြီမို့ မေးလို့မရတော့ဘူး။ အရင်ရက်ကလို ပြန်ကောင်းလာမယ်မှတ်ပြီး နာရီဝက် တနာရီခြား သွားနှိပ်တာလဲ မရပြန်ဘူး။ တယောက်ထဲ ဘာလုပ်ရမယ်မသိတော့ အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး ရှာဖတ်လိုက် သွားကြည့်လိုက်နဲ့ ခေါင်းခြောက်နေတာ။ သူcheckလုပ်ခိုင်းတာတွေ ကိုယ်တတ်သလောက် လိုက်ကြည့်၊ ဒါပေမယ့် မသိ။ လမုကို အဖုံးဖွင့်ကြည့်ဖို့ ရေးထားပေမယ့် သူပြထားတဲ့ လမု အမျိုးအစားနဲ့ မတူတော့ ဘယ်လို ဖွင့်ရမှန်းမသိ။ လမုပျက်လို့ အသစ်လဲရရင် ဘယ်လောက်ရှိလဲ ကြည့်မိတော့ ဈေးကြီးလို့ လန့်သွားတယ်။ toilet seatဘေးက ခလုပ်ကိုလဲ စစ်ပါလို့ ရေးထားမှ ဘေးကြားထဲမှာ ခလုပ်ရှိမှန်း အဲဒီအခါမှသိတယ်။ ဒါပေမယ့် မနှိပ်ရဲဘူး။ တော်ကြာ အားလုံးရပ်သွားမှဖြင့်။
တမနက်လုံး အမျိုးမျိုး လိုက်ဖတ်ကြည့်နေတာ အတော်ခေါင်းမူးလာတာနဲ့ ရပ်ထားလိုက်တယ်။ ညနေကျ keyword အမျိုးမျိုးနဲ့ တခေါက်လိုက်ရှာဖတ်တယ်။ အဲဒီအခါကျ တခုသွားတွေ့တယ်။ သူက sensor မှာ ဖုန်တွေကပ်နေတာလား စစ်ကြည့်ဆိုတော့ sensorတွေကို သွားသုတ်ကြည့်တယ်၊ သို့ပေသိ မရ! 'တိုတို'ကြောင့် စိတ်ညစ်တယ်ကွယ်။
နောက်ဆုံး လက်မြှောက်လိုက်တော့တယ်။ ကိုယ့်ဦးဏှောက်နဲ့ စဉ်းစားနိုင်သမျှ လုပ်ကြည့်ပြီးပြီ။ ကိုယ်မှားလုပ်မိလို့ ပျက်သွားရင်တော့ အဆူခံရတော့မပေါ့လို့ဘဲ မှတ်လိုက်တယ် အဟင့် ရွှတ်။ 'တိုတို'ပေးတဲ့ ဒုက္ခက မသေးဘူး။ ညကျ 'တိုတို' မဟုတ်တဲ့ 'ကိုကို' ကို ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးလို့ပြောမှ လမု ဓာတ်ခဲအားကုန်တာ ဖြစ်မပေါ့တဲ့။ ကဲ!! ဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ဖြုတ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားတုန်းကမရတဲ့ နံရံက လမုက အိမ်ကြီးရှင်ဖြုတ်ပြတော့ အလွယ်တကူထွက်လာတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ နောက်ဖက်မှာ ဓာတ်ခဲထည့်ရတာ တွေ့တော့တယ်။ အစကတည်းက အဲဒီနံရံကပ်လမုက ဘာနဲ့ အလုပ်လုပ်မှန်းမသိတာ။ အိမ်ကြီးရှင်က လမုဘဲဟာ ဓာတ်ခဲနဲ့ပေါ့လို့ အပြောခံရမှ ကိုယ့်ဘာသာ အတော်တုန်းတယ်လို့ မှတ်ချက်ချမိတယ်။
ဓာတ်ခဲလဲပြီးမှ သွားသတိရမိတယ်။ အိမ်ပြောင်းလာတုန်းက အိမ်ထဲမှာပါတဲ့ equipment တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ file တအုပ်ရှိတာ သွားသတိရတယ်။ မနက်ကတည်းက အဲဒါကြည့်မိရင် ပြီးနေတာကို။ ရှာကြည့်မိတော့ တွေ့ပြီ၊ ခလုပ်နှိပ်လိုက်လို့ setting မီးအပြင် ရှိသမျှမီးအားလုံးလင်းလာတာ ဓာတ်ခဲအားနဲလာတာကို ပြတာတဲ့။ နို့ သိမှသိဘဲဟာဂျီးကို။ 'တိုတို'ပေးတဲ့ ဒွတ်ခ ကိုကိုကယ်မှ ရတော့တယ်။
(သင်ယူစရာတွေက အိမ်ထဲမှာကိုဘဲ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ယုကဒန်းဘိုး ဆိုတဲ့ Underfloor heating ကြီးလဲ ခုထိ နားမလည်ပါ။ နှိပ်စရာတွေ ပိုပါတတ်တဲ့ ဧည့်ခန်းက အဲကွန်းလမုကိုလဲ အချိုးပြေပြေ မသုံးတတ်သေးပါ။ ဆက်ပြောရင် ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းတာတွေ များလာမှာမို့ ဒိုင်လျှိုထားလိုက်ဦးမယ်)
Posted by မြရွက်ဝေ at 9:30 PM5comments